Maraykanka oo Isra’iil ku eedeeyey Carqaladeynta wadahadalka Iran - Wargane News
Home Somali News Maraykanka oo Isra’iil ku eedeeyey Carqaladeynta wadahadalka Iran
Maraykanka oo Isra’iil ku eedeeyey Carqaladeynta wadahadalka Iran
Aqalka Cad ee Maraykanka iyo Wasaarada Arrimaha Dibada ee dalkaasi ayaa Arbacadii shalay dhaliil dusha uga tuuray maamulka Isra’iil oo faafiyey xog ku aadan wadahadalka reer Galbeedka kula jiraan dowlada Iran.
Saraakiil ka tirsan maamulka Isra’ill ayaa saxaafada u gudbiyey qodobo kamid ah wadahadalada sida hoose u dhexmaraya dalalka reer Galbeedka iyo Dowlada Iran oo ku aadan joojinta barnaamijka Nukliyeerka ee Iran.
Afhayeenka u hadlay Aqalka Cad ee Maraykanka ayaa sheegay in xogta ay Isra’iiliyiinta banaanka soo dhigayaan ay tahay mid wiiqin karta gor gortanka ay kula jiraan dowlada Iran.
Isra’iil ayaa olole xoogan ugu jirta in la joojiyo wadahadalka u dhaxeeya dalalka reer Galbeedka iyo Iran oo ay sheegeen in dowlada Iran ay wakhtiga uga dhumineyso caalamka inta Iran ay ka dhameystiraneyso hubkooda Nukliyeerka.
Isra’iil iyo qaar kamid ah dalalka Khaliijka sida Sucuudiga ayaa horey si hoose ugu baaqay Maraykanka inuu duulaan ku qaado dalka Iran si loo burburiyo barnaamijkooda Nukliyeerka.
Dowlada Iran ayaa iyadu ku dooda in barnaamijkeeda Nukliyeerka uu yahay mid aan wax raad ah ku lahayn military balse yahay barnaamij ay ku horumarinayaan awoodooda tamarta iyo cilmi baarista.
Somaliland: Daawo Xukuumadu Xaq Uma Laha Inay Labada Gola Iinsato Siyaasi Xuseen Axmed Oo Si Adag Uu Dhaliilay
Somaliland: Roads upgrading Right on Course
Somaliland: Madaxweynaha iyo ku-xigeenka La Doortay oo Kulan La Qaatay Guddiyadii Muraaqibiinta KULMIYE u qaabilsanaa Doorashadii Madaxtooyada